I-Black Shark 2, uhlalutyo kunye novavanyo lwe-terminal yokudlala ngokugqwesa | I-Androidsis
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo sikunikile ukubonakala kwethu okokuqala malunga neBlack Shark 2, ushicilelo lwesibini lwesiphelo esiza ukwanelisa ezona mfuno zimsulwa zabathandi bemidlalo yevidiyo, yenzelwe yona kwaye yadlala kuyo ngaphandle kwemida, ndiyacebisa ukuba uhamba ngokubonakala kokuqala ukufumana umbono wento oza kuyibona ngoku.
Ixesha lifikile, sibeke uvavanyo lweBlack Shark 2, uza kubona nathi ukuba ihamba njani xa udlala imidlalo, ukuba ziziphatha njani ezinye izinto ezinokufikelela kunye nokusebenza kweekhamera zayo. Hlala nathi kolu hlalutyo olunzulu lwe-Black Shark 2, i-terminal yokudlala ye-Android engapheliyo.
Njengamaxesha onke, nangona sele uyayazi le nto, siza kukushiya ngokulandelayo yinkcazo kwinqanaba lehardware, kunye nokuhambelana okuhle kakhulu. Nangona kunjalo, Ndicebisa ukuba uhambe nevidiyo ekhokelela kolu hlalutyo, Kulapho uzokwazi khona ukubona ubunyani bendlela yokuziphatha kweBlack Shark 2 kwiimeko ezahlukeneyo, ukusuka kwintsebenzo yokwenyani kwimidlalo yevidiyo ukuya kwiikhamera, mhlawumbi eyona nto imbi kakhulu kule terminal ungathenga LAPHA elona xabiso libalaseleyo.
Ukubalulwa kobugcisa I-Black Shark 2
Ibhanti Black Shark
Inkqubo yokusebenza Ipie ye-Android 9
Isikrini 6.39 "AMOLED-1080 x 2340 (HD epheleleyo +) isisombululo se-403 DPI
Iprosesa kunye ne-GPU I-Snapdragon 855 -Adreno 640
i-ram 8 / 12 GB
Ikhamera esemva Dual 12 MP camera with f / 1.75y with AI - Zoom x2 kunye Portrait
Ikhamera yangaphambili MP eyi-20 ene-f / 2.0
Unxibelelwano kunye nokongezwa I-WiFi ac - iBluetooth 5.0 - aptX kunye neAptX HD - iGPS ezimbini
Khu seleko Iscreen somfundi wescreen-ukuqondwa kobuso obuqhelekileyo
Ibhetri I-4.000 mAh ngeNtlawulo ekhawulezileyo 4.0 - 27W nge-USB-C
Ixabiso Ukusuka kwi-549 euro
1 Ubungakanani besiphelo, ingxaki yemihla ngemihla?
2 Yenzelwe ukudlala umbulelo kwiShark Space
3 Inqaku lakhe elibuthathaka: Ikhamera
4 Imultimedia kunye nokuzimela, yeyakho
Ubungakanani besiphelo, ingxaki yemihla ngemihla?
Inyani icacile, iBlack Shark 2 inayo Imilinganiselo ye-163,61 x 75 x 8,77 yeemilimitha, ibalaselisa ngaphezu kwayo yonke ubukhulu, Zonke zinobunzima obungaphezulu kwe-200 gram iyonke. Sijonge ngokungathandabuzekiyo ifowuni ethi, kunye nesakhelo sayo esisezantsi nesiphezulu eskrinini, iyenze ibe nkulu, phantse yonke le nto yenza kube nzima ukuyisebenzisa ngesandla esinye, ke ngoko, ukuba ucinga ngakumbi ngemihla ngemihla Isiphelo esiku-smartphone oza kuyidlala, mhlawumbi wenza impazamo enkulu. Nangona kunjalo, ayizizo zonke izinto ezimbi kwinqanaba loyilo, kwaye ngeenjongo zayo, zilungile.
Ixuba iglasi kunye nesinyithi, egalelwe ngohlobo lokuba isivumele ukuba siyibeke ngokuthe tye kwaye ibe mnandi ngokupheleleyo ezandleni, oku kuthetha ukuba kulungile kakhulu ukuba into esiyifunayo kukudlala, umlinganiselo wesikrini wenza ukuyisebenzisa kwimowudi yepanoramic kuyonwabisa. Kuxa sidlala ngokuchanekileyo xa sibona eyona nto siyithandayo. Nangona kunjalo, kuya kufuneka ndikhankanye kule veki ishushu ukuba bendiyivavanya ubushushu bayo bunyuke kancinci, nokuba iyacaphukisa ngamanye amaxesha, nangona ingekho ngaphezulu kwezinye iiterminali ezinje nge-iPhone X, kodwa itsala ingqalelo ngakumbi xa sikhumbula ukuba inenkqubo yokupholisa enelungelo elilodwa lomenzi.
Yenzelwe ukudlala umbulelo kwiShark Space
Kulapho i-Black Shark 2 ngokuqinisekileyo iqala ukukhanya ngokukhanya kwayo, kwaye ayisiyiyo kuphela ngenxa yelogo yangasemva kunye nee-LED ezimbini zecala ezinokuqwalaselwa ukonwaba ngaphakathi kuseto, kodwa ngenxa yokuba inayo yonke into oyifunayo izixhobo zekhompyutha kunye nesoftware zihamba zikhangela isandla amava omsebenzisi ilungelelaniswe ngakumbi neemfuno ezifanayo, Makhe sijonge kuwo onke amanqaku abambe umdla wethu:
Ukuchukumisa okuhle: Ngale nto, ifowuni ibuthathaka ngakumbi kuxinzelelo kwiindawo ezithile zesikrini, ulongezo olunomdla olungasetyenziswanga ngabaphuhlisi
Ukuhlaziywa kwe-240Hz kwipaneli yokuthinta: Xa sisebenza kwimowudi yomdlalo sifumana eyona mpendulo inamandla esinokuyicinga, oku kuyaphawuleka kancinci xa kudlalwa imidlalo yevidiyo kunye nabahlaseli.
El Imoto eshukuma ilungisiwe: Ngaphandle kwamathandabuzo, njengoko benditshilo kwividiyo, yenye yezona zinto zibalaseleyo endizifumene kwi-Android, iphantse yalinganisa ngokugqibeleleyo i3D Touch ye-iPhone ngokulandelanayo, ngokungathandabuzekiyo iphumelele kwaye namava okudlala akhululekile.
Nangona kunjalo, uninzi lwendumiso luya ku Indawo yookrebe, Indawo yolawulo lomdlalo wevidiyo esinokufikelela kuyo ngeqhosha lasecaleni, apho siya kuba nayo le misebenzi ilandelayo:
Umdlalo weMidlalo: Idesika ye carousel enemidlalo yevidiyo esiyifakileyo.
Isitudiyo seGamer: Icandelo lokudiliza apho siya kuba nakho ukulawula UkuChukumiseka okuhle, simahla i-RAM, uhlengahlengise izaziso kunye nokulungisa ulawulo. Kufanelekile ukuba sikhankanye ukuba asinakubhekisa kulawulo kuba khange sikwazi ukuwavavanya ngaphaya kokuboniswa kweBlack Shark eMadrid, ngenxa yoko asinakugweba eli candelo okwangoku.
Ulwazi malunga neFPS, ubushushu besiphelo sendlela kunye nokusebenza.
Kulapho iBlack Shark 2 ibonisa isifuba sayo, eyona nto idityanisiweyo endakha ndayifumana kwisiphelo sendlela yemidlalo yevidiyo Kwaye yile nto inika esi sigxina zonke izizathu zokuba, ziyilelwe ngokwenene abo basebenzisi xa beza kudlala kwi-smartphone yabo ye-Android, awuyi kuswela izizathu zokuyithenga ukuba kungenxa yesi sizathu.
Inqaku lakhe elibuthathaka: Ikhamera
Kwakufuneka ibe nenqaku elibi xa sijonga ixabiso. Eyokuqala iyabonakala, ineekhamera eziqhelekileyo ngakumbi kuluhlu oluphakathi kwaye ngokukhawuleza zisikhumbuza inkampani yaseTshayina ethembele kuyo, iXiaomi. Sineenkqubo ezimbini zekhamera ngasemva, zivela MP eyi-12 yokuvula f / 1.75 kwaye enye yazo ineelensi zomnxeba zoom x2. Ujongano luyafana nolo lweXiaomi kwaye ndicebisa ukuba ubukele ividiyo ukuba ijonge indlela esebenza ngayo ngokweenkcukacha. Siqala ngokufota okuqhelekileyo, iyazikhusela kwiimeko eziqhelekileyo, nangona inokuhlala iphuculwa ngokusetyenziswa kwe-HDR, Nangona kunjalo, akunakutsho ukuba kwenziwe uphuculo olungaphaya kokugcwalisa imibala kancinci kunye nokuhlisa ukuqaqamba komfanekiso.
Iyasokola ngenxa yokugquma okungaphezulu okanye ukukhanya okwahlukileyo, okubonisa ingxolo eqhelekileyo ukuba yintoni, ikhamera yaphakathi. Ewe kunjalo, imowudi yeArtificial Intelligence, ephinda ibonakale kum njengesihluzi esilula esigcwalisa imibala ngakumbi ukuba kunokwenzeka, kodwa kufuneka iqatshelwe ukuba yenza ukuba ifoto ibe nomtsalane ngakumbi (kunye nokungaqiniseki). Ngokubhekisele kwimowudi yemizobo sifumana iprofayili efanelekileyo, ixhaswe ngokucacileyo yisoftware, inika iziphumo ezoneleyo kwaye incinci inokubekwa ityala kwiimeko ezifanelekileyo zokukhanyisa. Kwenzeka into efanayo nakwiikhamera ezikwiimeko eziphantsi zokukhanya, kuyamangalisa indlela ezihlangabezana ngayo nezi meko, ngokuqhubekeka ngokugqithileyo ewe, kodwa ... kuyimfuneko kumatyala aphantsi, obu bubungqina bokwenyani.
Ngokubhekisele kwikhamera ye-selfie esiyifumanayo Inzwa enye ye-20 MP ene-f / 2.0 aperture ezikhuselayo, inezinto ezininzi ezinokukwazi ukusebenza kweenzwa zangasemva kwaye iya kusivumela ukuba sithathe i-selfie ngamanye amaxesha Kwiinethiwekhi zentlalo ngaphandle kokungxama, ayizibonakalisi ngcono, okanye kokubi. Okokugqibela, kwesi sigxina sinethuba lokurekhoda umxholo kwi-4K nakwi-1080p kwii-FPS ezingama-30 ngendlela ezinzileyo, asifumananga ngxaki ekusetyenzisweni kwayo okanye kumgangatho wokuhla, nangona kunjalo, asinakho ukuzinziswa koomatshini, kwaye kubonisa . Imakrofoni irekhoda iaudiyo kwisitishi esinye kwaye unokubona iziphumo zokugqibela ngokuthe ngqo kwividiyo ekhokelela kolu hlalutyo ukwenza izigqibo zakho.
Imultimedia kunye nokuzimela, yeyakho
Isikrini silungile, sifumana ukukhanya okwaneleyo phantse kuyo nayiphi na imeko yemihla ngemihla esivumela ukuba siyisebenzise umxholo we-audiovisual kwizisombululo ezipheleleyo ze-HD nge-HDR, abamnyama benyulu kakhulu kwaye iphaneli yayo yokwenza ngokwezifiso kwicandelo lesethingi liya kusivumela ukuba sihambise ngokugcwala kweklasikhi yemibala enikezela ngokubanzi olu hlobo lwesikrini. Isandi siqaqamba kancinci, sifumana isandi esinamandla sesitiriyo ewe, kodwa sigqithisiwe enkonkxiweyo kwaye siphulukana nomgangatho njengoko sisonyusa ivolumu. Uyakwazi ukuva yonke into ngokugqibeleleyo, kodwa ngamanqanaba asemgangathweni.
Ngokumalunga nokuzimela, ungalindela ntoni. Sine-4.000 mAh ekhangeleka intle nokuba sidlala kamnandi. Kuvavanyo lwam sifikelele ngokulula kwi-7 kunye neeyure eziyi-8 zesikrini, Ke xa sidlala sizakufika kusuku olunye lokusetyenziswa, kwiintsuku ezimbini ukuba senza ukusetyenziswa komgangatho wefowuni. Khumbula ukuba asinayo i-3,5mm Jack port, kodwa sine-adaptha ye-USB-C.
Uyilo kunye nezixhobo zihamba ngokugqibeleleyo, kunzima ukwenza ngcono
Ukuzimela kuyaphawuleka naxa sidlala
Ukudityaniswa kwesoftware ephantse ukuba nyulu kwenza ukusetyenziswa kwayo kube luyolo
Ixabiso liqulathe umxholo ubukele imakethi
Ikhamera ixhaphake kakhulu kuluhlu oluphakathi
Inzima kwaye inkulu, ayinakwenzeka ukuyisebenzisa ngesandla esinye
Silindele ipaneli eyi-120 Hz
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Reviews » I-Black Shark 2, uhlalutyo kunye novavanyo lwe-terminal yokudlala ngokugqwesa
I-Android R iya kwazisa izikrini ezandisiweyo